आमासंग शारीरिक सम्पर्क गरेको केटो जब छोरी माग्न त्यहि घर पुगेपछि… |
February 15, 2022 adminLeaveaComment on आमासंग शारीरिक सम्पर्क गरेको केटो जब छोरी माग्न त्यहि घर पुगेपछि…
एक युवकले सामाजिक सञ्जालमा डेटिङको सबैभन्दा आश्चर्य पार्ने घटना सेयर गरेका छन् । घटना पढ्दा सबैलाई अचम्म लाग्यो। उनीहरुले यसलाई कुनै कथाभन्दा कम ठानेका छैनन् ।आखिर के हो त घटना? टिन्डर (डेटिङ एप्लिकेसन/वेबसाइट)मा म्याच भएपछि एक केटीसँग केटाको प्रेम बस्यो । गर्लफ्रेन्डले आफ्नो अभिभावकसँग भेट्न बोलाए। तर त्यहिँ साँझ उसले जीवनमा नसोचेको घटनाको सामना गर्नुपर्यो।
२१ वर्षको युवकले केहीवर्षपहिला ४० वर्षीया महिलासँग सम्बन्ध राखेका थिए । एक बारमा भेटिएका दुईको सम्बनध शारीरिक सम्बन्धसम्म पुगेको थियो । बारमा भेटिएको महिलासँगको केही महिनापछि युवकले डेटिङ साइट टिन्डरमा १९ वर्षकी केटीसँग भेट्यो र दुवैको प्रेमसम्बन्ध शुरु भयो । दुवैबीचको सम्बन्ध यति राम्रो भयो की केटीले केटालाई आफ्नो अभिभावकसँग भेट्न बोलाइन्।
तर, केटीको घरछेउ पुगेपछि केटाको होस उड्यो। केटाले देखेको घर त्यहि थियो जहाँ उ गर्लफ्रेन्डको आमासँग आइसकेको थियो । केटाले दुःखी हुँदै आफ्नो सबैकुरा गर्लफ्रेन्डलाई बतायो ।शुरुवातमा गर्लफ्रेन्डलाई मजाकजस्तो लागिरहेको थियो। तर युवकले उसको आमाको नाम नै भनिदिएपछि केटीले उसको कुरामा विश्वास गरिन्। त्यसपछि उनीहरुको ब्रेकअप भयो। युवकले सोसल साइट रेड्डिटमा आफ्नो नाम नलेखि यसरी पूरा घटना लेखेका छन्।
यी पुरानो नेपाली पैसा तपाइ सङ्ग बिक्री छ भने 1 लाखमा बिक्री हुन्छ कमेन्टमा सम्पर्क नम्बर छोड्नु होला?
कुखुरा पकाउन रखेको तातोपानी को भाडाे मा आफ्नै २ बर्ष कि छोरी उम्लेदै…
यस्तो घटना जसलाई कसैले पनि पत्याउने थिएन यदी यो घटना क्यामेरामा कैद नभएको भए,जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस
यस्तो मास्क लगाउने गर्नुभएको छ?होसियार रहनुहोस्,यस्तो तथ्य बाहिरियो।